Salar de Uyuni, waa jawi jannada ku yaal Bolivia | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Bolivia, Maxaa la arkaa
América del Sur Waa meel cajaa’ib leh, waa dhul leh taariikh millenimo iyo muuqaal qurxoon. Isha Yurub, waxay sidoo kale ku jirtaa qoondada qalaad. Amazon, Peru iyo burburkeeda, Ecuador iyo buuraheeda, Argentina iyo barafkeeda o Bolivia iyo cajaa'ibyadeeda gaarka ah oo aan maanta ku iftiiminayno Salar de Uyuni.
Saalarkaan Waa lamadegaanka ugu weyn uguna sarreeya adduunka. Way weyn tahay, waxay ku taal Bolivia, maantana, in wax walba ay ku wareegaan lithium barakaysan oo ku jira baytariyada dhammaan aaladaha elektaroonigga ah, sidoo kale waxay ku jirtaa isha warshadaha teknolojiyadda. Aan baranno.
2 Guryaha Cusbada ee Uyuni
3 Booqo Salar de Uyuni
Gobolka Plurinational ee Bolivia wuxuu leeyahay sida caasimada Sucre laakiin fadhiga fulinta, doorashada iyo awooda sharci dejintu waa magaaladeeda kale ee muhiimka ah, La Paz. Waxay xuduud la leedahay Argentina, Paraguay, Brazil, Chile iyo Peru waana inaad maqashay wararkii ugu dambeeyay ee sheegaya inqilaab uu dhacay maxaa yeelay natiijada doorashada lama aqoonsan. Madaxweynihii ugu dambeeyay ee dastuuri ah iyo isbadal weyn ee dalka wuxuu ahaa Evo Morales.
Bolivia waxay leedahay khasnado badan oo qadiimi ah, kumanaan, sida Tiwanaku, tusaale ahaan, ama Samaipatku. Inbadan waxay kujiraan Andes, kuwa kale waxay kujiraan xaalad badbaado wanaagsan ama ka xun, laakiin dhammaantood waxay nooga warramayaan gobol markii hore aad u firfircoonaa oo muhiim u ahaa ilbaxnimada.
Guryaha Cusbada ee Uyuni
In kasta oo ay leedahay qadiimiyadeeda qadiimiga ah, qofku ma seegi karo fursadda uu ku booqan karo mid ka mid ah muuqaalka dabiiciga ee ugu fiican adduunka: ballaadhan ee Salar de Uyuni. Sidaan ku sheegnay soo bandhigida Waa lamadegaanka ugu weyn uguna sarreeya adduunka.
Guryaha Cusbada ee Uyuni Waxay leedahay 10.582 kiiloomitir oo laba jibbaaran oo dhererkeeduna yahay 3650 mitir oo joog ah ee gobolka koonfur-galbeed ee dalka, ee gobolka Daniel Campos, waaxda Potosí. Qiyaastii 40 kun oo sano ka hor qaybtan ka mid ah dhulka Bolivia waxay ahayd Harada Minchin qiyaastii 11 kun oo sano ka hor Lake Tauka. Waqtigaas cimiladu way ka duwanayd, ma ahayn qalalan oo qalalan, oo roob joogto ah ayaa da'ayay.
Markaas waxaa imaan lahaa a xilli cimilo kulul oo qalalan oo sababay harooyinka waaweyn ee Andean inay yaraadaan taasoo keeneysa sameynta guryo milix leh sida Uyuni ama Coipasa. Harooyinku waxay noqdeen guryo cusbo ama harooyin yaryar, sida harooyinka hadda jira ee Uru Uru ama Poopó.
Meeqa milix ah ayey leeyihiin cusbada Uyuni? Su'aal wanaagsan. Waxaa lagu qiyaasaa in qaarkood 10.000 milyan oo tan oo milix ah. Waxaa jira ku dhowaad kow iyo toban lakab oo cusbo ah oo dhumucdiisu kala duwan tahay, inta u dhexeysa hal ilaa toban mitir. Qolofka sare waa midka dhererkiisu yahay toban mitir. Wadarta guud ee qolka milixda waxaa lagu xisaabiyaa inuu yahay 120 mitir, inta udhaxeysa lakabyada brine iyo dhoobada.
00 Sannad kasta qiyaastii 25.000 tan ayaa la soo saaraa, laakiin sidaan kor ku sheegnay halkan waxa maalin un muhiim noqon doona ma aha milix aad u badan laakiin lithium. Lithium, oo ku jira brine halkan oo ay weheliyaan magnesium, potassium, sodium iyo boron sulfates, waa qaybta ugu weyn ee baytariyada ay isticmaalaan dhamaan aaladaha elektaroonigga ah, markaa kaydka adduunku aad ayuu muhiim u yahay. Taladaydu? Warka ku saabsan dhacdooyinka Bolivia waa in lagu akhriyaa furahan. Mareykanka wuxuu tixgelinayaa in Bolivia ay leedahay keydka lithium ugu weyn adduunka.
Intii aan ka fekerayay xogtaan oo ah mid aad muhiim ugu ah in la fahmo siyaasada Bolivia, waxaan sii wadaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan boggan cajiibka ah ee, marka lagu daro muhiimadiisa xagjirka ah, waa dalxiis weyn. Sababtoo ah? Hagaag, mid kamida sawirada qurxinaya qoraalkan waa daliil fiican: asalka cad, cirka buluuga ah, sawirada ugufiican.
Intaa waxaa dheer, baalasha sidoo kale waa American Flamingo Seddex Meelood oo Taranka Xajmiga, ololiyihii Andean, kii James iyo kii reer Chile. Marka wax walba waa la isku daraa si ay u noqoto meel ay ku jirto magnetism badan. J) Haa, sanadkii qiyaastii 300 kun oo dalxiisayaal ah ayaa yimaada sanadkii hore, 2019, wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Safarka Adduunka sida Soojiidashada Dalxiiska ugu Fiican Koonfurta Ameerika.
Booqo Salar de Uyuni
Goorma ayaa ugu wanaagsan sanadka in la soo booqdo? Bishii Nofeembar waxaad sidoo kale qaadi kartaa sawirro wanaagsan si aad ugu aragto flamingos taranka buuxa. Intaa ka dib, daqiiqad kasta way wanaagsan tahay, in kasta oo wax waliba ay leeyihiin waxtarkooda iyo waxyeellooyinkooda.
Waxaa jira laba xilli, xilli roobaadka taas oo ku taal xagaaga Koonfurta Ameerika laga bilaabo Diseembar illaa Maarso; iyo xilli qalalan taas oo udhaxeysa May iyo October, jiilaalka. Midda hore waa marka biyaha milixdu ku ururaan dusha sare ka dibna a muraayad weyn taasi waxay umuuqataa inay lasocoto cirka. Tan labaad, xilliga qalalan, muraayada ma sameysmo laakiin waxaa jira cimilo ka wanaagsan.
Haddii aad ku sugan tahay woqooyiga Argentina ama aad ku nooshahay halkaas, booqashada waa mid si fudud loo heli karo. Xaqiiqdii, in badan oo reer Argentine ah oo ka soo jeeda woqooyiga ayaa soo booqda waqti noloshooda ka mid ah maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay safar fudud oo baabuur ah oo ka yimaada gobollada sida Tucumán, Jujuy ama Salta. Haddii aad joogto Bolivia booqashada waxyaabo kale way fududahay inaad halkaasna aado. Waxaa jira dalxiisyo badan In kasta oo qaar badani iskood u socdaan, haddaad meel fog ka timaadid, ammaan ma aha inaad kiraysato booqasho maalin ah
Waxaa jira wax yar oo tilmaamid ah iyo inaad ku timaaddo gaarigaaga haddii aadan ogeyn inay taasi kugu sii adkeyn karto. Waxaa jira safar maalinle ah haddii aadan waqti haysan ama ilaa saddex maalmood si aad u booqato hareeraha u dhow, biyaha kulul ama geysyada. Waxa aan ka maqnaan karin shandadaada waa muraayadaha qorraxda, muraayadaha indhaha, koofiyadda, biyaha, lacag kaash ah oo aad ku tagto musqusha, qubeys haddii safarku dheer yahay ama bixiyo tigidhada.
Haddii aad ku sugan tahay Argentina, sida ugu fiican ee looga gudbo waa inaad ku sameyso La Quiaca, Gobolka Jujuy, dhanka Villazón, ee Bolivia. Halkaas waxaad ku raaceysaa tareen sagaal saacadood gudahoodna waxaad ku jirtaa meeshii aad u socotay. Ama waxaad raaci kartaa bas oo aad ugu dulqaadataa xaalada xun ee wadada. Haddii aad ka timid wadan kale markaa waad awoodaa Diyaarad ku timaada La Paz ka dibna diyaarad kale u raacda Uyuni, waxaa jira duulimaadyo maalin kasta, ama baska habeenka dalxiiska oo qaata 10 saacadood ama gaari kireysta ama tareenka aada Oruro halkaasna tareenka uu tago Uyuni
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Bolivia » Salar de Uyuni, muuqaalka jannada ee Bolivia
Maxaa lagu arkaa Medinaceli